Banaanbax ballaaran oo dowlada Iran looga soo horjeedo oo ka dhacay magaalada Tehran… – Hagaag.com
Banaanbax ballaaran oo dowlada Iran looga soo horjeedo oo ka dhacay magaalada Tehran…
Posted on 12 Janaayo 2020 by Admin in World // 0 Comments
Waxaa magaalada Tehran ee caasimada dalka Iran ka dhacay banaan bax balaaran oo looga soo horjeeday diyaaradii rayidka ahaa ee ay soo rideen milatariga Iran iyo sida dowlada markii hore u inkirtay ugana been sheegtay diyaaradaasi lasoo riday.
Dadka banaan baxa dhigayay oo isugu soo baxay banaanka hore ee labo Jaamacadood ayaa aad uga careysnaa diyaarada lasoo riday iyo sida dowlada Iran markii hore uga been sheegtay warbixinadii soo baxayay ee sheegayay in gantaal lagu dhuftay Diyaarada.
Waxa ay dibad baxayaasha dowlada Iran ku sifeeyeen mid been badan oo runta qarisa, waxaana dibad baxayaasha sidoo kale dalbanayeen in cadaalad helaan ehelada dadkooda ku dhinteen Diyaarada.
Ciidamada amaanka Iran ayaa xoog u adeegsaday in ay kala eryaan banaan baxayaasha oo arday u badnaa kuwaa oo codsanayay in ay is casilaan Hogaanka sare ee Iran sidoo kale ku dhawaaqayay ereyo ka dhan ah hogaanka dowlada.
Madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump ayaa taageero u muujiyay dadka dhigayay banaan baxa ka dhanka ah dowlada Iran, waxa uuna u balan qaaday in uu garab istaagi doono dibad baxayaasha.
“Waxay ku socotaa dadka geesiyaasha ah ee dhibban ee Iiraan: Waan idiin garab taaganahay tan iyo markii aan madaxweyne noqday dowladdeyduna way sii wadi doontaa inay idin garab istaagto, si dhow ayaan ula soconnaa dibadbaxyadiinna. Geesinimadiinnu waa mid dhiirrigelin ah.” ayuu yiri Trump.
Dowlada Iran ayaa markii hore ka been sheegtay diyaarada rakaab ee laoo riday, hase ahaatee Milatariga ayaa bayaan ay soo saareen ku qirtay in diyaarada usoo rideen si kama ah wax yar kadib duqeyntii ay la beegadeen saldhigyada Mareykanka ee Ciraaq.
Diyaarada ay soo rideen milatariga Iran oo laga lahaa dalka Ukrine ayaa waxaa ku dhintay 176-qof oo kasoo kala jeeday wadamo kala duwan, waxaana Iran falkan kala kulantay cambaareyn xoogan.